license - Synonyms of license | Antonyms of license | Definition of license | Example of license | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for license
Top 30 analogous words or synonyms for license
ခရက်ကာ တစ်ချို့ Company တွေကထုတ်တဲ့ Software တွေကျတော့ သူတို့ software ကို သုံးနိုင်ရန် registration file လေးတစ်ခုကို ထည့်ပေးရခြင်းမျိုးလည်း ရှိပါသည်။ ဥပမာ Kaspersky Antivirus 7.0 ဆိုလျှင် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ Kaspersky ကို သုံးနိုင်ရန်အတွက် License Key ဆိုသော ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို ထည့်ပေးရပါသည်။တစ်နှစ်သုံးနိုင်သော License key၊ နှစ်နှစ်ခံသော License Key စသည်ဖြင့် များစွာရှိပါသည်။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး License Key တူ၍မရပါ။ Kaspersky ကို Crack လုပ်ရန်ထို License key ကို အင်တာနက်ထဲရှာရပါသည်။ တွေ့တဲ့အခါမှာ ကောက်ထည့်။ ပြီးတော့မှ Automatic Updates ကို disable လုပ်ရပါသည်။မဟုတ်လျှင် Automatic Updates လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ့် Kaspersky ရဲ့ License Key ကို လှမ်းကြည့်တဲ့အတွက် ခိုးသုံးထားမှန်း သိသွားနိုင်ပါသည်။
PHP PHP Group သည် PHP ကိုအဓိက implementation လုပ်ကာ PHP License ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ နောက်ဆုံး version မှာ PHP 5.6.8 ဖြစ်ပြီး 16 April 2015 တွင်ထုတ်ခဲ့သည်။
StarUML StarUML သည် UML ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ MKLab မှ ထုတ်လုပ်ထားသည်။ StarUML ကို GNU GPL လိုင်စင်အောက်တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိ ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ဗားရှင်း ၂.၀.၀ ကို proprietary license အောက်တွင် စမ်းသပ်ဆော့ဖ်ဝဲ အနေဖြင့် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
MySQL JBoss model သည် ထိုကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပြီး MYSQL ဟာ Swedish company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MYSQL AB အထောက်အပံ့နှင့် ရပ်တည်နေခြင်းဖြစ်ပြီး MYSQL AB သည် codebase တော်တော်များများ၏ copyright များကို ချုပ်ကိုင်ထားသည့် အဖွဲ့လည်းဖြစ်သည်။ MYSQL project သည် source code ရရှိနိုင်ပြီး GNU General Public License အောက်တွင်ထားရှိပါသည်။
စတိဗ် ဘောလ်မား free software Linux kernel ကို “ […] အရာအားလုံးကို ထိခြင်းဖြင့် ဉာဏ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အာရုံကို ကိုယ်တိုင်အမြစ်တွယ်စေသော ကင်ဆာ” ဟု သူရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ ဂျီအင်ယူး အထွေထွေပြည်သူ့လိုင်စင် (ဂျီပီအယ်လ်) GNU General Public License (GPL) အား ယင်းကဲ့သို့ ကွန်ပျူတာညွှန်ကြားချက် မှ ခန့်အပ်ထားရာ ကွန်ပျူတာညွှန်ကြားချက် ဆင်တူရိုးမားအားလုံးအား ဂျီပီအယ်လ် သို့မဟုတ် လိုက်ဖက်သော လိုင်စင်တစ်ခု လက်အောက်တွင်သာရှိရမည်ကို ဘောလ်မားက စိုးရိမ်စိတ်ဖြင့်ပြောရာတွင် လိုင်စင်ဝေါ်ဟာရ “ဗိုင်ရယ်လ်” လိုင်စင် ဟူသော ဝေါဟာရကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Calligra Calligra Suite (KOffice) ဆိုသည်မှာ office suite တစ်ခုဖြစ်ပြီး KDE အတွက်ဖြစ်သည်။ Component အားလုံးသည် Free Software/Open source license ဖြစ်သည်။ KOffice ကို ၂၀၁၀ တွင် Calligra Suite အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲ ခဲ့သည်။ KOffice application ကို OpenDocument အသွင်အပြင်ဖြင့် အသုံးပြုထားပြီး လိုအပ်သော file format များကို KDE မှ ထုတ်ကာ KOffice homepage တွင် ရရှိနိုင်သည်။
Java ပလက်ဖောင်း လက်ရှိအချိန်တွင် JRE တွင်ပါဝင်သော အခြေခံ လိုင်ဘရီများသည် ယခင်ကကဲ့သို့ပင် အခမဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲစစ်စစ်ကြီးများ မဟုတ်သေးပေ။ Free Software Foundation ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှု့များကို လည်းတွေ့နေရပါသည်။ ထိုပရိုဂျက်ကို GNU Classpath ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။ ၂၀၀၆ခု ၁၁လ ၁၃ရက်နေ့တွင်၊ Sun သည် Java ၏ မှုရင်းကုဒ်အားလုံးကို ၂၀၀၇ခု ၃လပိုင်းတွင်GNU General Public License အောက်တွင် ထုတ်ပြန်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့လေ၏။
ပါရဂူဘွဲ့ Ph.D ဘွဲ့၏ သမိုင်းကို ပြန်ကောက်ရလျှင် ၉ ရာစု မြေထဲပင်လယ်ခေတ် မဒရာဆက်စ်၌ ရှိခဲ့ဖူးသော "ijazat attadris wa 'l-ifttd" ("license to teach and issue legal opinions") တွင်တွေ့ရပေသည်။ အစ္စလမ်ဥပဒေအရ အကန့်အသတ်ရှိသော်ငြားလည်း Ph.D နှင့် ဆင်ဆင်တူပေသည်။ ပါရဂူဘွဲ့အဖြစ် အလယ်ခေတ်တွင် ဥရောပ ရှိတက္ကသိုလ်များက တိုးချဲ့လာခဲ့သည်။ အများအားဖြင့် သီအိုလိုဂျီ၊ ဆေးပညာနှင့် ဥပဒေပညာများတွင်ဖြစ်သည်။ Ph.D ဘွဲ့ကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့အဖြစ် နာမည်ကျော်ပညာရှင်များအား ပေးအပ်လေ့ရှိခဲ့သည်။
OpenDocument OASIS က အသိအမှတ်ပြုသော OpenDocument ဖိုင် versions များကို အခမဲ. ဒေါင်းလုပ် ရယူနိုင်ပြီး၊ သုံးစွဲနိုင်သည်။ ITTF (Information Technology Task Force) ကလည်း ISO/IEC 26300 OpenDocument Format ကို "list of freely available standards" အောက်တွင် ထည်.သွင်းခဲ.ပြီး၊ click-through license ကို လိုက်နာပါက မည်သူမဆို အခမဲ. ဒေါင်းလုပ်ရယူ၊ သုံးစွဲနိုင်သည်။